ညှစ်ဆွဲလိုက်လျှင် – Grab Love Story
အခု အောင်ပွဲခံသွားသူကတော့ ဒွန်းပါတဲ့။ ကျားကိုးစီး စားမကုန်တဲ့ ဒွန်းပါ။ ဆင်ပြောင်ငါးစီး အားမာန်ကြီးတဲ့ ဒွန်းပါ ခင်ဗျာ ဒိုင်လူကြီး ရွှေဓူဝံက အသံဝါကြီးနှင့် ကြေငြာလိုက်ပြီးနောက် ဒွန်း၏လက်ကို ကိုင်မြှောက်ပြလိုက်တော့မှ ချိုလွင်နှင့် ရွှေစင်တို့နှစ်ယောက် သက်ပြင်းချနိုင်တော့သည်။ သည်တစ်ပွဲ ဒွန်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရတာ အမောပင်။ ဒွန်းဆိုသည်မှာ ယခုမှ တက်သစ်စ ဖြစ်သော်လည်း တော်တော့်ကို နာမည်ကြီးသော လက်ဝှေ့သမားတစ်ယောက် ဖြစ်သည်ကိုတော့ ထည့်ပြောဖို့ လိုမည် မထင်ပါ။ သံမဏိဒွန်းဟု နာမည်ကြီးသည်ကို ထောက်ခြင်းအားဖြင့် သူ့ခံနိုင်ရည် မည်မျှရှိသည်ကို မှန်းဆနိုင်ပါသည်။ အရပ်က ၆ ပေ ၆ လက်မ။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်ကလည်း အရပ်နှင့် မလိုက်အောင် တောင့်တင်းကြံ့ခိုင်တာမို့ ချိုလွင်စွဲမက်လောက်စရာ ဖြစ်နေသည်။ ချိုလွင်သည် မိန်းကလေးပင် ဖြစ်သော်လည်း သူ့အဖေက အားကစားဖြင့် နာမည်ကျော်လာခြင်းဖြစ်သဖြင့် ငယ်ငယ်ကတည်းက အားကစားပွဲများကို စွဲစွဲမြဲမြဲ ကြည့်ရင်းမှ ဒွန်းကို တစ်ဖက်သက် စွဲမက်နေခြင်း ဖြစ်လေသည်။ ချိုလွင်၏ စုံစမ်းချက်အရဆိုပါလျှင် ဒွန်းသည် အသက် သုံးဆယ် မပြည့်သေး။ ရည်းစားလက်ကိုင်မရှိ။ ယခင်တုန်းကတော့ ရှိခဲ့ဖူးမှာ သေချာသည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒွန်းသည် ကိုယ်ခန္ဓာ တောင့်တင်းကြံ့ခိုင်ရုံမက နှုတ်ကလည်း အလွန်ချိုသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သာမန်လက်ဝှေ့သမားတစ်ယောက်လို အ အကြီးမဟုတ်။ သွက်လက်ဖျတ်လတ်စွာ စကားဆိုတတ်တာကြောင့်လည်း ပရိတ်သတ် ချစ်ခြင်းကို ခံရလေသည်။ မျက်လုံးမျက်ဖန်ကောင်းပြီး နဖူးကျယ်သဖြင့် ရုပ်ကလည်း အတော့်ကို ခန့်သည်။ လက်ဝှေ့ထိုးသည်ကလည်း ဆုကြေးမနည်းလှ။ သည်လိုလူမျိုးတစ်ယောက်သည် ဘာကြောင့် မိန်းမမရှိသေးသလဲကို ချိုလွင်စဉ်းစား၍ မရချေ။ ချိုလွင်ရော ရွှေစင်ပါ ဒွန်း၏ စံချိန်လွန် လီးကြီးကို သတိမပြုမိပဲ မနေနိုင်။ အားကစားဘောင်းဘီ ပွပွကြီးဝတ်ထားသော်လည်း စားနေကျ ကြောင်ဖားများအနေဖြင့် ဒွန်း၏ ယောက်ျားအင်္ဂါ ဘယ်လောက်ကြီးသလဲကို ခန့်မှန်းနိုင်ကြသည်။
အတွေ့အကြုံ ပိုများသော ရွှေစင်က သူ့ကိုယ်သူ ပိုယုံသည်။ ဘယ်ယောက်ျားမဆို သူမ၏ ရှေ့မှောက်တွင် ဒူးထောက်ရစမြဲ မဟုတ်ပါလား။ စစချင်းတုန်းကတော့ ရှက်သည်၊ ကြောက်သည်၊ သိပ်ခံစားရသည်။ တစ်ခါ၊ နှစ်ခါကနေ သုံးလေးခါ ဖြစ်လာတော့ ထိုယောက်ျားဆိုသူများ ရွှေစင့် ပေါင်ကြားထဲတွင် အရည်ပျော်ကုန်ကြတော့သည်။ ရွှေစင်တစ်ယောက် စိတ်ပါလက်ပါဖြင့် ညှစ်ဆွဲလိုက်လျှင် သူတို့အားလုံး ငါးမိနစ်အတွင်း ထွက်ကုန်ကြသည်။ ကြာလေလေ ရွှေစင်အတွက် ပျင်းဖို့ကောင်းလေ ဖြစ်လာရ၏။ ဒါပေမယ့် လူသားစားသော ကျားကိုမှ ရွေးစားသည့် ကျားဆရာ ကြောင်ဖြစ်သော ရွှေစင်မှာ ယောက်ျားဆိုလျှင် အမြဲအဆင်သင့်ပင်။ ဒါ့အပြင် ဒွန်းက လောလောဆယ် အရမ်းကို ၀က်ထောနေသည် မဟုတ်ပါလား။ ဒွန်းတစ်ယောက် ရွှေစင်ကို စွဲသွားပါက သူမအနေဖြင့် တစ်ချက်ခုတ်၊ နှစ်ချက်ပြတ်ပင်။ ချိုလွင်ကတော့ ရွှေစင်လိုမဟုတ်။ ရွှေစင်တစ်ယောက် မျက်နှာများသည်ကို သူမက လုံးဝ သဘောမကျချေ။ ရည်းစားတစ်ယောက်၊ နှစ်ယောက်လောက် ရှိတာက ဘာမှ မဆန်းသော်လည်း ယောက်ျားတွေ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက်နှင့် လိုက်အိပ်နေတာကိုတော့ ဘယ်လိုမှ ဘ၀င်မကျနိုင်။ ချိုလွင်ကိုယ်တိုင်လည်း အပျိုမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် မီးနဲ့ကစားတာ သိပ်မကောင်းဘူးလို့တော့ ခံယူထားသည်။ ပြောမယ့်သာပြောရသည်။ ဒွန်း၏ ဘောင်းဘီအောက်မှ ဖုထစ်နေသော အရာကြီးကိုတော့ ရွှေစင့်လိုပင် ချိုလွင်လည်း ရင်ခုန်ပါသည်။ ဒွန်းတစ်ယောက် အ၀တ်လဲခန်းအတွင်းတွင် အမောဖြေနေခိုက် လေ့ကျင့်ဖက် အောင်ဇံက မေးလိုက်သည်။ သည်နေ့ည ငါတို့ ကလပ်သွားမယ်။ လိုက်ခဲ့လေဟင့်အင်း၊ ငါအိမ်ပြန်ချင်တယ်ဟာကွာ၊ မင်းက အမြဲတမ်း သည်လိုပဲ။ နောက်တစ်လဆိုရင် မင်းအနေနဲ့ ရွှေခါးပတ် လုရတော့မယ်။ ပြီးရင် စိန်ခေါ်ပွဲတွေ တောက်လျှောက်လာမှာ။ အခုအချိန်ကလေး ပျော်ရမှာကို။ လာစမ်းပါကွာ။ အသေအကြေ ထိုးတဲ့အခါလည်း ထိုး။ အနားယူတဲ့ အခါလည်း အနားယူပေါ့ ထိုနေရာသို့အရောက် အောင်ဇံ၏ လေသံက တိုးညှင်းသွားပြီးနောက် အခုတစ်လော ပွဲခင်းထဲကို အလန်းကလေးတွေ ရောက်လာတယ်နော်။
မင်းကို လာကြည့်ကြတာ ဖြစ်မယ်။ ဘယ်လိုလဲ။ သူတို့ကို စိတ်မ၀င်စားဘူးလား။ ယောက်ျားကောင်း၊ မောင်းမတစ်ထောင်တဲ့နော်။ မင်းနဲ့ငါ တွဲလာတာ သူငယ်တန်းကတည်းက။ မင်း-ကောင်မလေးတွေနဲ့ တွဲသွားတာ နှစ်ခါ-သုံးခါလားပဲ မြင်ဖူးတယ်။ ဒွန်းက မချိလို့သွားဖြဲ ရယ်သလားမေး ဆိုသော သဘောဖြင့် သွားဖြဲပြလိုက်သည်။ အောင်ဇံကတော့ အာပေါင်အာရင်း သန်သန်ဖြင့် ဆက်ပြောနေဆဲ။ စိတ်လေးဘာလေး လျှော့ ကိုယ့်လူ။ မလျှော့ရင် ပေါက်ထွက်သွားမယ်။ ဟား ဟား။ အဲဒါမှ ကျော်မကောင်း ကြားမကောင်းတွေ ဖြစ်ကုန်မယ်သည်လိုပြောလို့ ဒွန်းတစ်ယောက် အရမ်းနှာဘူးကျပြီး မိန်းမလိုက်စားနေသည်ဟု မထင်စေလိုပါ။ သူ့ပြဿနာမှာ ညီလေးက အရပ်သိပ်ရှည်နေသဖြင့် ဂွင်းထုသောအခါ လရည်အကုန်မထွက်ခြင်းပင် ဖြစ်လေသည်။ ကြာလာတော့ ကျင်ချောင်းထဲက လရည်များက စုကာ ဘောအောင့်လာတတ်သည်။ ကြာလာလျှင်တော့ ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်မည် မသိ။ ဒါကို အောင်ဇံအား ပြောပြဖူးတာမို့ အောင်ဇံက သူ့အား နောက်ပြောင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ သည်လိုဖြင့် နှစ်ခါတိတိ ကံမကောင်းခဲ့သော ဒွန်းသည် မိန်းကလေးများကို စ}ရန်ပင် မ၀ံ့မရဲ ဖြစ်လာရတော့သည်။ တစ်နေ့တစ်ခါ ဂွင်းထုခြင်းကသာ သူ့အတွက် ထွက်ပေါက် ဖြစ်ပေတော့၏။ ကြာလာတော့လဲ ထုရင်းထုရင်း ခံနိုင်ရည်တွေ တိုးလာကာ အခုဆိုလျှင် နာရီဝက်လောက်ကြာအောင် ထုနေရလေသည်။ ငါ ကားထဲ သွားလိုက်ဦးမယ် အောင်ဇံတစ်ယောက် မိန်းမအကြောင်း မြိန်ရေယှက်ရေ ပြောတော့မည်ကို အတွေ့အကြုံအရ သိလိုက်သည်။ သည်လို နားထောင်လျှင် ညီလေးခေါင်းထောင်လာမည် စိုးသဖြင့် ဒွန်းက မတ်တတ်ရပ်လိုက်၏။ သူ့ညီလေး နိုးလာလျှင် တော်တော်နှင့် ပြန်မအိပ်တတ်သည်ကို သိထားသဖြင့် အန္တရာယ်ကို မဖိတ်ခေါ်ဝံ့ပါ။ အောင်ဇံကလည်း အတင်းပင် တောက်တဲ့ကပ် ကပ်လိုက်လာ၏။ သူတို့နှစ်ယောက် ကားရပ်ထားရာ နေရာသို့ ထွက်လာရင်းက လမ်းတွင် မြင်မြင်သမျှ အမဟူသမျှကို ငမ်းလာခဲ့သည်။ စိတ်ကြိုက်တွေ့တာ တစ်ယောက်မှ မရှိ။ သူက ပေါင်တံရှည်ရှည်၊ အရပ်မြင့်မြင့် မိန်းမပျိုများကိုသာ လိုချင်သည်။
သူ့ညီတော်မောင်အတွက် ရွှေဘိုမင်းကြိုက် မှ အံကိုက်ဖြစ်ပေမည်။ သာမန် တရုတ်မ ပုပုကလေးများဆိုလျှင် သူ့ကောင်နှင့် ဘယ်လိုမှ တော်မည်မဟုတ်။ ခက်တာက အရပ်ရှည်သော မိန်းကလေးများက မချောကြပေ။ သည်အကြောင်းကို ပြောပြသောအခါ အောင်ဇံက ရယ်သွမ်းသွေးလျက် အရပ်ရှည်တဲ့လူက ဟိုဟာရှည်မယ်လို့ မင်းကို ဘယ်သူပြောသတုန်း ဟု ဆိုသည်။ ဒွန်းက ပြုံးရင်း ကားကို ဒေးကလပ်တစ်ခုဆီ ဦးတည်လိုက်သည်။ သည်လို အောင်ပွဲခံသည့်နေ့မျိုးမှ လိုက်မပို့ပေးလျှင် အောင်ဇံက သူ့ကို အပြစ်တင်လို့ ဆုံးတော့မည်မဟုတ်။ သူကိုယ်တိုင်ကတော့ အရက်သောက်ပြီး ပုလွေမှုတ်ခံတာလောက်နဲ့ပဲ ကျေနပ်ရမည် ဖြစ်သည်။ အရင်တစ်ခေါက်က ကြူကြူဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကို သတိရလာသည်။ ချက်ချင်းလိုလိုပင် ညီလေးက ခေါင်းထောင်ချင်လာ၏။ သည်လိုနဲ့ အတွေးတွေ များနေသဖြင့် ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လို ကလပ်ထဲ ရောက်လာသည်ကိုပင် မသိလိုက်။ အောင်ဇံကတော့ အရပ်ရှည်တဲ့လူကို ရှာပေတော့။ ငါကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ရှမ်းတရုတ်မလေးတွေပဲ ကိုင်မယ် ဟုဆိုကာ စူဠလိပ် ရေထဲလွှတ်လိုက်သလို ထွက်သွား၏။ တစ်ယောက်တည်း ယောင်လည်လည်ဖြင့် ဒွန်းသည် အရက်ဘားဖက် ရောက်လာ၏။ သည်နေရာက နည်းနည်း မြင့်သဖြင့် ကလပ် တစ်ခုလုံးကို အပေါ်စီးမှ မြင်ရသည်။ အပျော့နဲ့ပဲ စတာပေါ့ဟု တွေးရင်း ကျားဘီယာ နှစ်လုံးဟု မှာလိုက်ရင်းက ဘေးဘီကို မျက်လုံး ကစားလိုက်သည်။ သည်တွင်ပဲ ချိုမြမြ မျက်ဝန်းတစ်စုံနှင့် အကြည့်ချင်း ခလုပ်တိုက်မိသည်။ လှလိုက်တာဟုတွေးရင်း ကျားဘီယာကို စုပ်လိုက်၏။ မိန်းကလေးက သူ့အား တစ်ချက်မျှ ပြန်ကြည့်ပြီး အကြည့်ကို လွှဲလိုက်၏။ လှပကြော့ရှင်းသော ကိုယ်ခန္ဓာလေးကို ဒွန်းဖက် ကျောပေးကာ တစ်စုံတစ်ခုကို ရှာနေသကဲ့သို့ ရှိလေသည်။ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ် စီးထားသဖြင့် ဖြောင့်တန်းသော ပေါင်တံကလေးများက သာလို့ ပေါ်လွင်နေသည်။ တင်ပါးကလေးများကလည်း လုံးကျစ်ကားစွင့်လို့နေ၏။ သူမက ဒွန်းကို နောက်တစ်ချက် ကြည့်ပြန်သည်။
သည်အခါတွင်တော့ ဒွန်း၏နှလုံးသားများ အခုန်မြန်လာတော့သည်။ ထိုစဉ်မှာပင် အလှနတ်ဘုရားမလေးက ဒွန်းဆီသို့ လျှောက်လာ၏။ အင် . . . မဟုတ်သေးဘူး။ ဒွန်းကို ကျော်ကာသွားသည်။ မဖြစ်ချေဘူး။ ဒွန်း၏ ဘီယာသောက်နေသည့်တိုင် ခြောက်သွေ့နေသော ပါးစပ်ထဲမှ စကားသံအချို့ ထွက်လာသည်။ ဘယ်သူ့ကို ရှာနေတာလဲဟင်?ချိုလွင့်ရင်ထဲတွင် ထိတ်ကနဲ ဖြစ်သွား၏။ မမျှော်လင့်ပဲ ဒွန်း၏ အသံကို ကြားရသဖြင့်လား။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်လိုချင်တာ ရတော့မည်မို့လား မပြောတတ်။ သေချာတာကတော့ ချိုလွင် အရမ်း ရင်ခုန်နေပါသည်။ လည်ပင်းနည်းနည်း ဟိုက်သော အနက်ရောင် အင်္ကျီလေးကို ၀တ်ထားတာမို့ ချိုလွင့်ရင်တွေ ခုန်နေတာကို ဒွန်းသတိထားမိလျှင် မြင်နိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ဒွန်းမှာ ချိုလွင့်ရင်သားများကို အာရုံရောက်နေပုံရသဖြင့် ပါးကလေးများ ရှိန်းကနဲဖြစ်အောင် ချိုလွင်ရှက်သွား၏။ အို . . . မဟုတ်ပါဘူး။ ချိုလွင့် သူငယ်ချင်း ရွှေစင်ကို ရှာနေတာပါ ဒွန်းက နည်းနည်း ရဲတင်းလာပြီးနောက် စကားဆက်လိုက်သည်။ ဘဲဘဲကို ရှာတာ မဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာဘဲဘဲမှ မရှိဘူးသည်လောက်ဆိုလျှင် ဒွန်းစိတ်ချပြီ။ လက်ထဲမှ တိုက်ဂါးတစ်လုံးကို ကမ်းပေးရင်း သိပ်လှတာပဲဟု ချီးကျူးလိုက်၏။ ကောင်မလေးက ချိုချိုလွင်လွင် ရယ်ကာ အသာတကြည်ပင် ဘီယာကို သောက်သုံးသည်။ ကံတရားကို ဒွန်းမယုံချင်။ သည်ကောင်မလေးသည် ပျိုမြစ်နုနယ်ပြီး တကယ်ကို ထွားသည်။ ဒေါက်မြင့် စီးထားသော အရပ်က ခြောက်ပေထက် မနည်းနိုင်။ တင်တွေ၊ ရင်တွေကလည်း အတော့်ကို ထွားသည်။ သည်အချိန်တွင် အောက်ပိုင်းတစ်နေရာမှ တင်းလာသည်ကို ဒွန်းတစ်ယောက် သတိပြုလိုက်မိသည်။ သည်ကောင်မလေးကို မရရင် မဖြစ်ဟု သူ ၀န်ခံလိုက်ရလေသည်။ သူ့ကို ဒွန်းတစ်ယောက် စိတ်ဝင်စားနေသည်မှာ ချိုလွင့်အတွက် သိပ်ကိုသေချာနေပါသည်။ သူမကလည်း ဒွန်းကို လိုချင်နေသည်မှာ တစ်ပိုင်းကို သေမတတ်ပင်။ ခက်တာက မြောင်းပေးနေသည့်တိုင် ရေက တော်တော်နဲ့ မလာသေး။ ချိုလွင် စိတ်မရှည်တော့။ သည်ကနေ့ သိပ်ပူတာပဲနော် ဟု ပြောလိုက်ရင်းက အင်္ကျီရင်ပတ်လေးကို လေ၀င်စေရန် ဟပေးလိုက်သည်။ တစ်ဆက်တည်း သည်မှာ လူတွေ သိပ်များတော့ ပို ပူနေသလိုပဲ သည်လောက် ပါးစပ်နားရောက်နေမှတော့ လျှာနဲ့ ထုတ်လျက်လိုက်မှာပေါ့။ ဒွန်းက လက်လွတ်မခံနိုင်တော့ပါ။ အဲဒါဆိုရင် နားအေးပါးအေး အေးအေးဆေးဆေး နေလို့ရမယ့်နေရာတစ်ခု သွားရအောင်လေ ဘယ်နားသွားမလဲ။
အိမ်ပြန်ပြီးတော့ပဲ နားတော့မယ် ပါးစပ်နားရောက်နေသော အစာကို ပုတ်ချခံလိုက်ရသလိုမျိုး ခံစားလိုက်ရသည်။ ဒွန်းတစ်ယောက် ကြက်နာကြီး လည်လိမ်သလို ငိုင်ကျသွားသည်ကို မြင်ရသောအခါ ချိုလွင့်ရင်ထဲတွင် ကြည်နူးခြင်းများဖြင့် ပြည့်နှက်သွားသည်။ သူခံစားနေရသည်ကို မကြည့်ရက်သဖြင့် ခပ်မြန်မြန်ကလေး ပြောလိုက်သည်။ ကားမမောင်းနိုင်တော့ဘူး။ ကိုဒွန်း လိုက်ပို့ပေးမလား သည်လိုကျပြန်တော့လဲ ဒွန်းပြုံးလိုက်သည်မှာ မေးရိုးပြုတ်တော့မလားလို့တောင် ထင်ရလေသည်။ ယိုင်ချင်ယောင် ဆောင်လာသော ချိုလွင့်ပုခုံးကလေးကို အသာကလေး ဖက်ရင်း ဒွန်းက အခန်းထဲ မြန်မြန်ဝင်လိုက်၏။ အခန်းတံခါးကို ပြန်ပိတ်လိုက်ပြီးသည်နှင့် ချိုလွင်က ဒွန်း၏ ရင်ခွင်ထဲ ရောက်သွားတော့သည်။ အနမ်းတွေ ဖလှယ်ပြီးနောက် ချိုလွင်က ပါးစပ်ကို ဟပေးလိုက်သည်။ ဒွန်း၏လျှာက ချက်ချင်းပင် ထိုးဝင်လာ၏။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဖက်ကာ လျှာချင်းကလိနေရင်းကနေ ဒွန်း၏ ပုဆိုးထဲ ထိုးထားသော ပိုက်ဆံအိတ်က ချိုလွင့်ဗိုက်ကို လာထောက်မိနေသည်။ ပိုက်ဆံအိတ်ကို ခါးနောက်ကျောမှာ ထိုးထားတာ မဟုတ်ဘူး ဟု တွေးမိသော်လည်း ခါးနောက်ကျောမှာ ထိုးပါက ခါးပိုက်နှိုက်ခံရတတ်သည်ကို ချက်ချင်းပင် သဘောပေါက်လိုက်၏။ ပိုက်ဆံအိတ်ကို ပုဆိုးကြားထဲ ထိုးထားရင် အဲသည်ပုဆိုးကို ချွတ်ပစ်မယ်ဟု တွေးရင်း ဘီယာအရှိန်ဖြင့် နဂိုကထက် ရဲတင်းနေသော ချိုလွင်က ဒွန်း၏နားနားကပ်ကာ အထဲသွားရအောင် ဟု ဆော်သြလိုက်၏။ ဒွန်းကဖျတ်ကနဲ ချိုလွင့်ကို ပွေ့ယူလိုက်တော့ ချိုလွင့်ရင်ထဲ အေးကနဲ နွေးကာသွားသည်။ အေးကနဲဆိုတာက သည်လို ယောက်ျားတစ်ယောက်၏ အပွေ့မခံဖူးသဖြင့် လန့်သွားခြင်း ဖြစ်ပြီး နွေးကနဲဆိုတာကတော့ ဒွန်း၏ ရင်ခွင်ကြီးက နွေးထွေးလွန်းလှသဖြင့် ဖြစ်လေသည်။ အားကစားလုပ်သော ဒွန်း၏ ရင်အုပ်နှင့် လက်မောင်းသားများမှာ ဖုထစ်ရုန်းကြွလို့နေသည်။ ဒါမျိုးကြီးကို ဟိုကောင်မ ရွှေစင် ဘယ်လောက်လိုချင်မလဲ ဟု တွေးမိသောအခါ ချိုလွင့်ရင်ထဲတွင် ပီတိတို့ ဖြာဝေသွားသည်။ ]]ယောက်ျားတွေဆိုတာ ငါနဲ့မတွေ့ခင်သာ ဟောသည်ပေတံလို ထောင်နေတာ။ ငါနဲ့တွေ့လိုက်ရင် သည်ပီကေ၀ါးဖတ်လို ပျော့သွားတာပဲဟု ဆိုလေ့ရှိသော ရွှေစင်ကို သည်တစ်ခါတော့ အပြတ်ချိုးနိုင်ပြီဟု တွေးရင်း ချိုလွင့်စိတ်ထဲတွင် ကြည်နူးလျက်ရှိသည်။
တစ်နေ့လည်လုံး ကြားခဲ့ရသော ဒွန်း၏ချီးကျူးစကားတို့ကို ပြန်စဉ်းစားရင်း ချိုလွင်တစ်ယောက် အပျော်ကြီးပျော်နေသည်မို့ မည်သို့မည်ပုံ အိပ်ခန်းထဲ ရောက်လာသည်ကိုပင် မသိလိုက်ချေ။ ဒွန်းက လက်မြန်ခြေမြန်ဖြင့် ချိုလွင့် အင်္ကျီနှင့် စကတ်ကို ချွတ်ပစ်လိုက်သည်။ ထို့နောက်တွင်တော့ သူ့စပို့ရှပ်ကို သူပြန်ချွတ်ကာ နောက်ဆုံးတွင်မှ ရုန်းကန်နေသော ညီလေးကို ထွက်ပေါက်ပေးသည့် အနေဖြင့် အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ဆွဲချလိုက်သည်။ စိတ်ထဲမှတော့ သည်ကောင်မလေး ထွက်ပြေးလျှင်လဲ အခန်းတံခါးကို ပိတ်ထားသဖြင့် သူ့လက်က လွတ်အောင် မပြေးနိုင်လောက်ဟု ခန့်မှန်းနေမိသည်။ အောင်မယ်လေးတော့ ချိုလွင့်ပါးစပ်မှ ထွက်လာသော အသံပါ။ ဒွန်းသည် ပိုက်ဆံအိတ်ကို ခါးပုံစထဲ ထိုးလေ့ရှိသူမဟုတ်မှန်း ချိုလွင် သိလိုက်ရပါပြီ။ အခုနက ချိုလွင့်ဗိုက်ကို လာထောက်မိသော အရာမှာ ဒွန်း၏ညီတော်မောင်သာ ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်ဆိုလျှင် ရှစ်လက်မကျော်သော စံချိန်လွန်လီးကို မြင်ပါက ချိုလွင်တစ်ယောက် ထွက်ပြေးမိမည် ဖြစ်သော်လည်း ယခုတော့ အရက်ကလေး ၀င်ထားသဖြင့် ထွက်ပြေးဖို့ကို စိတ်ပင်မကူးမိ။ ဘာတွေကို စိတ်ကူးမိနေသလဲတော့ မသိ။ သူမ၏ လက်တစ်ဖက်က ပေါင်ကြားထဲ ရောက်သွားသည်ကိုတော့ ဒွန်းမြင်လိုက်ရသဖြင့် သိန်းထီပေါက်သူပမာ ပျော်မြူးသွားသည်။ ဒွန်းက အပျော်တစ်ဝက်ဖြင့် ချိုလွင့်ကို ကုတင်ပေါ် တွန်းလှဲကာ အပေါ်မှ တက်ခွလိုက်သည်။ သူ့လက်ထဲမှ ညီတော်မောင်က ကြီးသထက် ကြီးလို့လာသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ထည့်တော့မည်ဟု ချိုလွင့်ညီမလေးရှေ့ တေ့လိုက်သောအခါ ချိုလွင်က ဆတ်ကနဲ ရုန်းတော့သည်။ မ . . . မဖြစ်ဘူးထင်တယ်။ မလုပ်ပါနဲ့ဦး ဟာကွာ . . . ကိုယ့်ကိုလဲ သနားပါဦး။ သည်မှာ တိုးလို့တန်းလန်းကြီး ဖြစ်နေပြီအဲသည်လောက်ဆိုရင်တော့ မဖြစ်ဘူး။ ကွဲသွားလိမ့်မယ်။ ချိုလွင် ဘာလုပ်ပေးရမလဲ ပြောလေ။ တစ်ခြားဟာ လုပ်ပေးမယ်နော်။ . . . စုပ်ပေးရမလားမချင့်မရဲဖြင့် ဒွန်းက သူ့ညီတော်မောင်ကို ချိုလွင့်ပါးစပ်နား တေ့ပေး၏။
ဟ . . . ကျယ်ကျယ်ဟ။ အကျယ်ကြီးဟ ဟု သွားဆရာဝန်များ ဆိုလေ့ရှိသလိုပင် ချိုလွင်က ပါးစပ်ကို အစွမ်းကုန်ဖြဲကာ သူမ၏ လက်ဖျံရိုးလောက်နီးနီးရှိသော တုတ်ရှည်ကြီးကို ငုံခဲလိုက်သည်။ အရေပြားဖြတ်ထားသော ဒွန်း၏ ဒစ်ဖျားမှာ နည်းနည်းနောနောမဟုတ်။ ပါးစပ်ကို အစွမ်းကုန်ဖြဲမှ အတော်လောက်ဖြစ်သည်။ ကျင်ငယ်ထွက်သည့် အပေါက်ကလေးကို လျှာဖျားဖြင့် ကလိလိုက်တော့ ဒွန်းတစ်ယောက် ထွန့်ထွန့်လူးသွားသည်။ ချိုလွင်က အားတက်လာပြီး ဒစ်ဖျားကိုငုံကာ သွားဖြင့် အနည်းငယ် ကိုက်ပေးလိုက်၏။ ဒါတင်မက ဒွန်း၏လီးကြီးကို အဖျားမှ အရင်းတိုင် လျှာဖြင့် အားရပါးရ လျက်ပေးလိုက်လေသည်။ အား . . . ကောင်းလိုက်တာ ချိုရယ် ဒွန်း၏ အားပေးသံကြောင့် ချိုလွင်အားတက်လာပြီး ဥတွေကိုပါ ငုံလိုက်သည်။ ထို့နောက် အောက်မှအပေါ် ပြန်တက်ပြန်သည်။ ဒွန်းက အားမရတော့ပဲ ချိုလွင့်ခေါင်းကို ဆုပ်ကာ သူ့ဒုတ်ကို ထိုးထည့်လိုက်သည်။ လေးလက်မထက် ပိုမ၀င်နိုင်ပါချေ။ ချိုလွင်သည် အလျော်ပေးသည့်အနေဖြင့် လွတ်နေသော အရင်းပိုင်းကို လက်ဖြင့်ကိုင်ကာ ဂွင်းတိုက်ပေးလိုက်သည်။ လီးကြီးက ချိုလွင့်ပါးစပ်အတွင်းဝယ် ပိုလို့ကြီးလာသယောင်ရှိ၏။ ကြောက်လာသော ချိုလွင်က တောင်းတောင်းပန်ပန်ဖြင့် ထုတ်လိုက်ပါတော့ ကိုရယ်။ ကို့ဟာကြီးက အရမ်းကြီးနေတယ်။ အရည်တွေ ထုတ်လိုက်မှ ပျော့သွားမှာ။ အဲသည်တော့မှ ထုတ်လိုက်ကြရအောင်နော်ဒါလည်း ဟုတ်သားပဲဟု တွေးရင်း ဒွန်းက သုက်လွှတ်ရန် ကြိုးစားသည်။ သည်တစ်ခေါက်တွင်တော့ လွန်ခဲ့သော ဆယ်နှစ်တုန်းကလို မျက်နှာတစ်ခုလုံး ပေကုန်အောင် မပန်းမိစေရန် သတိထား၏။ ချိုလွင်ကလည်း စုပ်ပေးနေရင်းက လက်တစ်ဖက်ဖြင့် သူမ၏ ပေါင်ကြားထဲမှ အစေ့လေးကို ပွတ်ပေးရင်း ဖီလင်ယူနေသည်။ သည်လိုဖြင့် နှစ်ယောက်သား အရှိန်တွေတက်လာပြီးနောက် ချိုလွင်က အားစိုက်ကာ စုပ်ပေးသည်။ ပန်းတိုင်နှင့် နီးသထက် နီးလာပြီး နောက်ဆုံးတွင် ဒွန်းတစ်ယောက် ဆန့်ငင်ဆန့်ငင် ဖြစ်လာသည်တွင် ပြီးခါနီးပြီဟု သိသော ချိုလွင်က အားကုန်ကုန်းစုပ်လိုက်ရာ ဒွန်းရော သူ့ညီလေးပါ ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြင့် ပြီးသွားလေသည်။
ထွက်လာသမျှ လရည်များကို ချိုလွင်က လောဘတကြီး စုပ်ယူလိုက်၏။ တစ်လုပ်စာ အပြည့်ရသောအခါ မျိုချလိုက်ပြီးနောက် ကျန်သော အကပ်အသပ်များကို လျှာဖြင့်လျက်ယူလိုက်သည်။ သည်လောက်ကြီးသော လီးနှင့် သည်လောက်ကြီးသော ဝှေးစေ့များမှ ထွက်သော သုက်ရည်များမှာ နည်းနေသည်ဟု ချိုလွင့်စိတ်ထဲတွင် ထင်လိုက်မိလေသည်။ အမှန်မှာ အစိုးရိမ်ကြီးသော ဒွန်းက ဥများထဲမှ သုက်ကို မလွှတ်ပဲ အတင်းအောင့်ထားခြင်း ဖြစ်လေသည်။ အကျိုးဆက်မှာ ဘောအောင့်လာပြီး မျက်နှာရှုံ့လိုက်မိသည်။ ချိုလွင်က သတိထားလိုက်မိပြီး ဘာဖြစ်တာလဲ ကို ဟု မေးလိုက်သော်လည်း ဒွန်းက ဘာစကားမှမပြောပဲ သူမကို ကုတင်ပေါ် တွန်းလှဲလိုက်ရာ ငိုချင်လျက် လက်တို့ဖြစ်နေသော ချိုလွင်က အချိန်မဆိုင်းပဲ ပေါင်ကားပြီး လမ်းခင်းပေးလိုက်သည်။ ကုတင်ပေါ် အသာတက်လာသော ဒွန်း၏ပေါင်ကြားထဲမှ ရှစ်လက်မ ပေတံကြီးမှာ ယခင်အတိုင်းပင် မာကျောဆဲ။ ချိုလွင့် စောက်ပတ်ကလေးထဲမှ တထုတ်ထုတ်ဖြင့် ယားလာ၏။ အခုနကတည်းက ပွတ်ထားသဖြင့် စောက်ရည်တွေ ညောင်စေးကျအောင် စေးနေပြီ ဖြစ်လေသည်။ ချိုလွင်က ကုတင်ပေါ် လှဲချကာ မျက်စေ့များ မှိတ်ထားလိုက်သည်။ ချစ်သူသဘောကျ လုပ်ပါစေ။ ဖြစ်လိုရာ ဖြစ်ပါစေတော့။ လီးဒစ်ကြီး ၀င်လာသောအခါ ချိုလွင့်ပေါင်ကြီးများ ပိုကားသွားသည်။ ကန့်ကွက်သံ တစ်စုံတစ်ရာ မကြားရသဖြင့် ဒွန်းက အသာကလေး ရှေ့တိုးလိုက်၏။ ပုခုံးပိုင်း ၀င်သွားသောအခါ ချိုလွင့်ထံမှ တအင်းအင်းဖြင့် အသံထွက်လာသည်၊ နာကျင်ပုံတော့ မရချေ။ ချိုလွင့် စောက်ပတ်ကလေးထဲမှ တထုတ်ထုတ် သွေးတိုးနေသည်ကို ဒွန်းက ခံစားနေသလို ဒွန်း၏ ဒစ်ဖျားမှ တထုတ်ထုတ် သွေးခုန်နေသည်ကို ချိုလွင်က အာရုံခံနေမိသည်။ ပူနွေးသော ခံစားမှုက စောက်ပတ်မှတစ်ဆင့် သူမတစ်ကိုယ်လုံးသို့ ပြန့်သွားပြီးနောက် ရေနွေးနွေးဖြင့် ရေချိုးနေရသလိုမျိုး ဇိမ်ရှိလှသည်။ မိနစ်ပိုင်းကလေး ငြိမ်နေမိသည်က စိတ်တွင်းမှာ တစ်ကမ္ဘာလောက်ကြာသည် ထင်ရ၏။ သည့်နောက်မှာတော့ ဒွန်းက ရှေ့ထပ်တိုးလိုက်သည်။ လီးတစ်ဝက်ကျော်ကျော်လောက် ၀င်သောအခါ ချိုလွင့်လက်ကလေးတွေက ဒွန်းကို တွန်းရင်း ပေါင်တွေကို စေ့လိုက်၏။ ဒွန်းက အ၀င်မကြမ်းရဲပဲ ချိုလွင့်နို့တွေကို ကုန်းစို့ပေးလိုက်သည်။
သည်လောက်တုတ်သော လီးကြီး တစ်ဝက်ကျော် ၀င်နေတာကိုတောင် မအော်တာကို ဒွန်းအံ့အားသင့်သည်။ သည်ကောင်မလေးနှင့် တွေ့ရအောင် ဖန်လာသော ကံတရားကိုလည်း ကျေးဇူးတင်နေမိသည်။ ချိုလွင့် ခေါင်းကလေး နောက်သို့ လန်သွားသည်။ အခုနက နည်းနည်း နာသလို ရှိသဖြင့် ပေါင်ကို စေ့လိုက်တော့ ဒွန်း ဆက်မသွင်းနိုင်တော့။ ချက်ချင်းလိုလိုပင် နာတာပျောက်ပြီး အရမ်းယားလာသည်။ ယားတာလဲမဟုတ်။ ခံလို့ ကောင်းလှသည်။ ပေါင်တွေကို စေ့လိုက်၊ ကားလိုက် လုပ်ပေးနေမိသည်။ အလိုက်သိသော ဒွန်းက အသာကလေး နှုတ်ပြီး ပြန်ဆောင့်သည်။ အရင်းအထိ မသွင်းပဲ တစ်ဝက်လောက်သာ အသွင်းအထုတ် လုပ်ပေးနေရင်းမှ တဖြည်းဖြည်းချင်း မသိမသာကလေး တိုးဝင်လာသည်။ သိပ်မကြာပါ။ အရှိန်တက်နေသော ချိုလွင်တစ်ယောက် ကော့လန်ကာ ပြီးသွားတော့၏။ အား . . . မရတော့ဘူး။ ထွက်ပြီ။ ထွက်ကုန်ပြီကွာ။ အား . . . ဒွန်း၏ကျောပြင်ကြီးကို ကုတ်ဖဲ့ရင်း ချိုလွင်တစ်ယောက် ထွက်သွား၏။ သူမ၏ သန်စွမ်းလှသော ပေါင်နှစ်ချောင်းက အတင်းပင် ညှပ်ထားသည်မို့ ဒွန်းပင်လှုပ်၍မရ။ ချိုလွင်ပြီးတာ ခဏလေးမို့သာ တော်တော့သည်။ ဒွန်းလို ကြံ့ခိုင်သောလူမို့သာ ခံနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပိန်ညှောင်ညှောင် ကိုရီးယားမင်းသားတွေလို ပုံစံမျိုး ဆိုလျှင်တော့ ခါးကျိုးသွားနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် အဲသည်လို လူပိန်လေးတွေကလည်း ချိုလွင့်လို ကောင်မလေးမျိုးကို သည်လိုမျိုး ကျေကျေနပ်နပ် ကိစ္စပြီးအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မည်မဟုတ်။ သူ့လီးဒါဏ်ကြောင့် ချိုလွင်တစ်ယောက် မချိမဆန့် ခံစားပြီး အရည်တွေ ထွက်ကုန်သည်ကို ဒွန်းက ကျေနပ်စွာ ကြည့်ရင်း ချိုလွင့်နှဖူးလေးကို ညင်သာစွာ နမ်းရှိုက်လိုက်သည်။ ထို့နောက် ချိုလွင့် နားရွက်လေးများကို မနာအောင် အသာကလေး ကိုက်ပေးလိုက်သည်။ ဒွန်း၏လီးအောက်တွင် မရှုမလှ ခံစားရနေသော ချိုလွင်သည် ဒွန်းကို ပါးချင်းအပ်ကာ အတင်းဖက်ထားတော့သည်။ ဒွန်းက ရင်ထဲတွင် ဖိုးကြိုင်းတုတ် ဖြစ်သွားပြီး စောက်ပတ်ထဲမှ လီးကို ဆောင့်ရန် ကြိုးစားလိုက်သည်။ ချက်ချင်းတော့ လှုပ်၍ပင်မရ။ ချိုလွင်ပြီးတာ အရှိန်သေသွားတော့မှ အသာကလေး နည်းနည်းညှောင့်ပေးလိုက်သည်။ လီးက ခြောက်လက်မကျော် ၀င်သွားပြီမို့ အပြင်မှာ နှစ်လက်မခန့်သာ ကျန်တော့သည်။
ဒွန်း၏မျက်နှာမှ အပြုံးရိပ်ကို မြင်ရသောအခါ ချိုလွင်တစ်ယောက် ရှက်သွား၏။ အခုနက ကုတ်လိုက်၊ ခြစ်လိုက်ဖြင့် အိနြေ္ဒသိက္ခာ တစ်စက်မှမရှိအောင် ပြုမူခဲ့မိသည်များကို ပြန်လည်သတိရသောအခါ သေလောက်အောင် ရှက်မိတော့သည်။ ဦးနှောက်က ရှက်လေလေ၊ နှလုံးသားက ခံစားရလေလေ၊ ပြီးတော့ စောက်ပတ်လေးက ပိုကျဉ်းလေလေ ဖြစ်ကာ ချိုလွင့်ဖီလင်များ တက်လာပြန်သည်။ ယောက်ျားလီးနှင့် အတွေ့အကြုံမရှိတာလဲ မဟုတ်။ ဒါပေမယ့် သည်တစ်ယောက်ကိုမှ ဘာလို့သည်လောက် စွဲမက်နေသည်ကို ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပင် နားမလည်နိုင်။ အခုတော့ ဒွန်းက သူမကို အထင်သေးသွားပြီဟု ချိုလွင်တစ်ထစ်ချ ယူဆလိုက်မိတော့သည်။ ငါကလည်း ငါပါပဲလေ။ သည်ကနေ့ပဲ စကားပြောတယ်။ အခုတော့ တစ်တစ်ခွခွကို အလိုးခံနေမိတယ်။ သေလိုက်ပါတော့ မိချိုလွင်ရယ် ဒွန်းပြုံးနေမိသည်မှာ ချိုလွင့်ကို အထင်သေးသောကြောင့် မဟုတ်ပါ။ သူ့လီးကို ခြောက်လက်မအထိ အံကြိတ်ခံနေသော ချစ်သူလေးကို ကြည့်ရင်း အချစ်စိတ်တွေ တိုးနေသဖြင့် ပီတိအပြည့်ဖြင့် ပြုံးလိုက်မိခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဒွန်းက ချိုလွင့်နားနားကပ်ခါ တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်သည်။ ချစ်တယ် ချိုရယ်။ သိပ်ချစ်တယ်။ သိလား။ . . . ချိုက သိပ်လှတာပဲ။ ပြီးတော့ အပေး သိပ်ကောင်းတယ် သိလား။ဒွန်း၏ စကားများသည် ပူနေသော ချိုလွင့်ရင်ကို အေးသွားစေ၏။ အောက်မှ ထိုးထည့်နေသော ရှစ်လက်မ လီးကြီးကမူ ချိုလွင့်ညီမလေးကို မီးလိုပူလောင် စေလေသည်။ ချို့ကို သိပ် . . . သိပ် . . . ချစ်တယ်ကွာနောက်ဆုံး စကားများကို ဒွန်းသည် ဖြည်းဖြည်းချင်းနှင့် တစ်လုံးချင်း ကွဲပြားအောင် ပြောရုံမက အောက်မှလည်း တစ်ချက်ချင်း ခပ်ပြင်းပြင်း ညီလေးကို ဆောင့်ထည့်လိုက်လေရာ ချိုလွင်တစ်ယောက် မျက်ဖြူလန်ကာ ဒုတိယမ္ပိ ပြီးချင်လာပြန်လေသည်။ ကော့လန်တက်လာပြန်သော ချိုလွင့်ကို ကြည့်ရင်း ဒွန်း၏ တစ်ကိုယ်လုံး ချစ်စိတ်များ ပြည့်လာရသည်။ ချိုလွင်က ဘာမှမပြောသော်လည်း သူမ၏ လိုအင်ကို သိလိုက်သော ဒွန်းက အားစိုက်လျက် ဆောင့်ပေးလိုက် သောအခါ နောက်ထပ် လက်တစ်သစ်ခန့် ၀င်သွား၏။
အွန့် . . . အွန့် . . . ကောင်းလိုက်တာ ကိုရယ်။ ချိုလွင် ပြီးတော့မယ်။ ပြီးတော့မယ် သိလား ရေထဲမှ ငါးကို ကုန်းပေါ်တင်လိုက်သလို ထွန့်ထွန့်လူးနေသော ချိုလွင်အား ပုခုံးမှကိုင်ကာ ဒွန်းက ဖိထားလိုက်သည်။ ကို အဆုံးထိ သွင်းလိုက်မယ်နော် ချို။ နည်းနည်း အောင့်ခံလိုက်နော်ဟု ပြောလည်းပြော အောက်မှလည်း ဆောင့်ထည့်လိုက်သည်။ ချိုလွင်က နာကျင်ခံခက် ဖြစ်သွားသဖြင့် ဒွန်းကို အတင်း တွန်းထုတ်ပြန်၏။ သည်တစ်ခါတော့ ဒွန်း ကြမ်းတော့၏။ ချိုလွင့်ခါးသိမ်သိမ်လေးကို ကိုင်ကာ အတင်းပင် ဆောင့်ထည့်သည်။ တစ်လက်မ ထပ်ဝင်သွား သောအခါတွင်ကား ချိုလွင်က အတင်းရုန်းသည်နှင့် သူမခါးကို ကိုင်ထားသော ဒွန်းလက်များ ပြုတ်ထွက်သွားရသည်။ သို့သော် စောက်ပတ်ထဲတွင် တင်းကြပ်စွာ ၀င်နေသော လီးကြီးကား လုံးဝမကျွတ်ချေ။ ငရုတ်သီးနှင့် ပက်ခံလိုက်ရသည့်ပမာ ချိုလွင်သည် အတင်းပင် အော်တော့၏။ သို့သော် သူမ၏ ပေါင်နှစ်ဖက်ကား ဒွန်း၏ခါးကို တင်းကြပ်စွာ ညှပ်ထားဆဲ။ စောက်ပတ် ကွဲသွားတာလား။ ကာမအထွတ်အထိပ် ရောက်ပြီး ပြီးသွားတာလား။ ဒါမှမဟုတ် နှစ်ခုလုံးလားကို ဒွန်း မဝေခွဲတတ်။ သိလည်း မသိချင်တော့။ ချိုလွင့်ပေါင်တွေ နည်းနည်းလျော့သွားသည်နှင့် အားကိုတိုးကာ ဆောင့်တော့၏။ နှစ်ယောက်လုံးမှာ အရက်အရှိန်နှင့် ရမက်အရှိန် နှစ်ခုပေါင်းကာ ကွဲကွဲပြဲပြဲ ဂရုမစိုက်တော့ချေ။ ချိုလွင်ကလည်း ဒွန်းကြမ်းလာသည်ကို မတားနိုင်တော့။ သူမသည်လည်း အောက်မှ စောက်ရည်တွေ သာမက သေးတွေပါ တပွက်ပွက် ပန်းကာ တစ်ချီပြီးတစ်ချီ ပြီးနေတော့သည်။ သည်တစ်ခါ ပြီးတာ အတော့်ကိုကြမ်းသည်။ အရည်တွေနှင့်အတူ အသိစိတ်တွေပါ လိုက်ထွက်ကုန်သည်။ ချိုလွင်တစ်ယောက် နတ်ပြည် ရောက်သွားသလိုပင်။ စောက်ပတ်ထဲမှ ဝေါကနဲ ပန်းထွက်သွားသော အရည်များနောက်သို့ စိတ်တွေပါ}ပါသွား၏။ အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်သွားချိန်တွင် ဒွန်းကိုကုတ်ဖဲ့မိသော်လည်း ချက်ချင်းလိုလိုပင် လေလျော့လိုက်သော ဘောလုံးပမာ ဒူးတွေချောင်ကာ ပျော့ကျသွား၏။ ထိုတစ်ခဏလေးသည် ချိုလွင့်အတွက် တစ်ကမ္ဘာလောက် ကြာသလိုပင်။ စောက်ပတ်ထဲတွင် စီးစီးပိုင်ပိုင်ကြီး ရှိနေသော လီးကြီးကြောင့် ချိုလွင့်အိပ်မက်တွေ လှပလို့နေသည်။ ခဏနေတော့ ချိုလွင့်ကို ဖုတ်ကနဲ နတ်ပြည်မှ ပြန်ကျလာအောင် ထိုးချလိုက်သည်ကလည်း ထိုလီးကြီးပင်ဖြစ်သည်။ လေးလေးမှန်မှန်ဖြင့် ၀င်လိုက်ထွက်လိုက် လိုးနေသော လီးကြီးကြောင့် ချိုလွင် သတိပြန်ရလာသည်။
ချိုလွင် မျက်စိ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ သူ့ကို စိုးရိမ်တကြီး ကြည့်နေသည့် ဒွန်း၏ မျက်ဝန်းများကို တွေ့လိုက်ရသည်။ အခုနက ပြီးချင်တိုင်း ပြီး၊ ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်ခဲ့သည်ကို သတိရလိုက်ပြီး ချိုလွင် တော်တော်ရှက်သွားသည်မို့ နှုတ်ခမ်းလေးကို စူကာ ဘာလို့ သည်လောက်ကြည့်နေရတာလဲ ဟု ရန်ထောင်လိုက်၏။ ဒွန်း ကလည်း သူ့အပူနှင့်သူ။ သူစိတ်ပူသည်ကတော့ ချိုလွင်တစ်ယောက် သေသွားမှာကိုပင် ဖြစ်သည်။ အရင်တုန်းက သူ့လီးတစ်ဝက်အထိ ဘယ်မိန်းကလေးမှ မခံနိုင်ခဲ့။ အခုတော့ ခုနစ်လက်မကျော်အထိ ချိုလွင်က ခံခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ သေလုမတတ် အော်ဟစ်နေသေးသည်။ ချိုလွင်အော်သည်မှာ နာလို့လား၊ ကောင်းလို့လား၊ သူမသိချေ။ ဒါတင်မက သူတို့လုပ်နေတာ အတော်ပင် ကြာလေပြီ။ လက်ဝှေ့ထိုးကျင့်ရာတွင် ငါးမိနစ် တစ်ဆက်ရှင် ကျင့်လေ့ရှိသော ဒွန်းအတွက် အချိန်မှန်းရတာ သိပ်မခက်ပါ။ အနည်းဆုံး ဆယ့်ငါးမိနစ်မှ နာရီဝက်ခန့်ရှိပြီဟု ဒွန်းခန့်မှန်းမိသည်။ အခုတော့ ချိုလွင် သတိပြန်ရလာသည်ကို တွေ့ရသောအခါ ဒွန်းသိပ်ပျော်သွားပြီး နှင်းဆီဖူးသဏ္ဍာန် နှုတ်ခမ်းလေးများကို ကြင်ကြင်နာနာ နမ်းလိုက်မိသည်။ ချိုလွင်က လိုလိုလားလားပင် ပြန်လည်စုပ်ယူလိုက်၏။ ထို့နောက်တွင်တော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ဖက်လိုက်မိကြသည်။ အ၀တ်အစားမပါသော ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခု တစ်သားတည်းပမာ ပူးကပ်လို့သွား၏။ ချိုလွင့်လက်တွေက ဒွန်းလက်များကို ဆုပ်ကာ သူမနို့တွေပေါ် တင်ပေးလိုက်မိသည်။ မာတောင်နေသော နို့သီးခေါင်းကလေးများကို ဒွန်းက လက်ချောင်းလေးများဖြင့် ချေပေးလိုက်တော့ ချိုလွင့်ဖင်ကြီးတွေ ကော့လန်တက်လာသည်။ ချိုလွင် ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ သူတို့နှစ်ယောက်၏ ဆီးစပ်များက ပူးကပ်နေပြီ။ အခုနက ပါးစပ်ဖြင့်ပင် မငုံနိုင်သော ဒွန်း၏လီးကြီးတစ်ချောင်းလုံး သူမစောက်ပတ်ထဲ ၀င်သွားသည်ကို ပြန်တွေးမိသောအခါ ချိုလွင့်တစ်ကိုယ်လုံး တုန်ကာသွားသည်။ ကြောက်လို့တော့မဟုတ်၊ ဖီလင်တွေ တက်လာသောကြောင့် ဖြစ်၏။
သည်အခွင့်အရေးကို အရယူပြီး ဒွန်းက နည်းနည်းဖိထည့်လိုက်သည်။ လက်နှစ်သစ်လောက် အကျန်တွင် ချိုလွင့်မျက်နှာကလေး ရှုံ့မဲ့ကာ ထပ်မသွင်းတော့နဲ့ ဟု တားလေတော့သည်။ ပေါင်တွေကို စေ့ထားပြီး စောက်ပတ်ကို အတင်းရှုံ့ထားသည်မို့ ဒွန်း ဘာမှ ဆက်လုပ်၍ မရ။ မျက်နှာကလေး ငယ်နေပြီး အသနားခံနေသော ချိုလွင့်မျက်ဝန်းလေးများကို တွေ့လိုက်ရသောအခါ ဒွန်းအသာကလေး ဆွဲထုတ်မိလိုက်သည်။ ဒွန်း၏ နဖူးမှ ချွေးများ ချိုလွင့်ကိုယ်ပေါ် ကျလာမှ သတိရလိုက်သည်။ သူမတစ်ကိုယ်လုံးလည်း ချွေးတွေ၊ စောက်ရည်တွေနှင့် ရွှဲနေလေပြီ။ အောက်ဖက်မှာတော့ ပူလောင်အိုက်စပ်ပြီး မွေ့ရာတစ်ခုလုံး သူတို့ကိုယ်မှထွက်သော အရည်မျိုးစုံဖြင့် အိုင်ထွန်းနေလေ၏။ ဒွန်း၏နဖူးမှ ချွေးသီးများကို လက်ဖြင့် သုတ်ပေးလိုက်တော့ ဒွန်းက ပြုံးလိုက်ပြီး အသာကလေး တစ်ချက်ချင်း မထိတထိ ဆောင့်ပေးလိုက်ရာ ချိုလွင့်ထံမှ ညည်းသံလေးများ ပြန်ကြားရသည်။ အဟင့် . . . အဟင့် . . . ကိုရယ်ချိုလေး . . . ကိုယ့်ကို ချစ်လားချစ်လည်းချစ်တယ်၊ ကြောက်လည်းကြောက်တယ်။ ချစ်တာကတော့ ချို နည်းနည်းနာတာနဲ့ ရပ်ပေးလို့။ ကြောက်တာကတော့ . . . သူ့ဟာကြီးက သိပ်ကြီးလို့။ ပြီးတော့ . . . နားစိုက်ထောင်နေသော ဒွန်းကို ကြည့်ရင်း ချိုလွင်က ညှို့အားပြင်းသော ညုတုတု လေသံလေးဖြင့် ကိုက သိပ်လုပ်နိုင်တာပဲ။ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။ အခုထိ မထွက်သေးဘူး ပြောနေရင်းမှ ရွှေစင့်ကို သတိရသွားပြီး ချိုလွင်က နာရီကို လှမ်းကြည့်လိုက်သည်။ အချိန်အတော်လင့်သွားပြီကို သိသောအခါ ချိုလွင့်စိတ်ထဲမှ ပြောလိုက်မိ၏။ မြန်မြန်လုပ်မှပဲ။ ဟိုကောင်မ ဖင်ခံရာက ပြန်လာရင် ဒုက္ခချိုလွင့်အနေဖြင့် သည်လီးကို မည်သူနှင့်မျှ ဝေမစားနိုင်ချေ။ ဒွန်းကို သူမသာလျှင် လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားချင်သည်။ ရွှေစင့်အနေဖြင့် အလိုးခံချင်ပါက လိုးပေးမည့်သူတွေ မရှားပါ။ နောက်တစ်ခုက ရွှေစင်က ယောက်ျားတွေကို စွဲအောင်လုပ်တတ်သည်မို့ ရွှေစင့်နောက် ဒွန်းပါသွားမည်ကို ချိုလွင်စိုးရိမ်ပါသည်။ ဒွန်းကတော့ ဒါတွေကို မသိ။ မပြီးသေးဘူးလား ကိုရယ် ဟု ညုတုတု ပြောလိုက်သော အသံလေးကို ကြားသောအခါ ဖတ်ကနဲ ဖတ်ကနဲ အားရ၀မ်းသာ ဆောင့်တော့၏။ အွန့်ကနဲ အွန့်ကနဲ အသံထွက်လာကာ ချိုလွင့်ခေါင်းကလေး လန်ကျသွားတော့သည်။
အောင့်အောင့်ပြီး နာသလို ကောင်းသလိုကြီး ဖြစ်နေသဖြင့် အသံပင် မထွက်နိုင်။ ဒွန်းက သိပ်မကြမ်းလို့သာ တော်တော့သည်။ အပြာကားတွေထဲကလို ကြမ်းပါက အသက်ပင် ပါသွားလောက်သည်။ အတင်းထိုးဝင်လာသော လီးကြီးကို ချိုလွင့်စောက်ပတ်ကြွက်သားလေးများက အတင်းညှစ်ကြသည်။ သို့ရာတွင် လုံးဝပျော့ကျမသွား။ သံမဏိချောင်းပမာ မာတောင်နေသော လီးကြီးသည် လှံရှည်တစ်ခုက ပိုးစကို ထိုးခွဲသလို ချိုလွင့် စောက်ပတ်အဆုံးတိုင် ဒုတ်ဒုတ်ထိ ၀င်ရောက်သွားလေသည်။ ချိုလွင်သည် ပေါင်ကိုကားပြီး စောက်ပတ်ကို ရှုံ့ကာ ညှစ်ရသည့် အရသာကို သိလာပြီမို့ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို တစ်တီတူးပမာ မိုးပေါ်ထောင်ပေးလိုက်၏။ ဒွန်းအနေဖြင့် လှုပ်ရှားရတာ ပိုလွတ်လပ်သွားပြီး လီးကြီးက ချိုလွင့် ဂလိုင်လေးအတွင်း မွှေနှောက်တော့သည်။ ချိုလွင်သော ညည်းသံလေးများက အခန်းတွင်း ပျံ့လွင့်သွားသည်။ အသံပိုင်ရှင် မိန်းမချောလေးမှာမူ ခေါင်းထဲမှာ ချာချာလည်ကာ ဘာတွေကို လုပ်မိလို့ လုပ်မိမှန်းပင် မသိတော့ချေ။ ဒွန်းကို ကုတ်ဖဲ့လိုက်၊ အိပ်ရာခင်းတွေကို ဆုပ်နယ်ချေမွလိုက်၊ စောက်ရည်တွေကို ပန်းထုတ်လိုက်၊ နောက်ဆုံးတွင် တံတွေးများပင် နှုတ်ခမ်းထောင့်မှ စီးကျလာသည်။ ချိုလွင်ပြီးပြန်ပါပြီ။ ဒွန်းကား မပြီးသေးချေ။ မိုင်တစ်ရာခရီးကို ပြေးလိုက်ရသည့်အလား ချိုလွင့်ရင်ထဲတွင် မောဟိုက်လို့နေသည်။ ဒါတောင် သူမက အိပ်ရာပေါ်လှဲကာ ပေါင်ကားပြီး ခံနေခြင်းဖြစ်သည်။ အပေါ်မှ တက်ဆောင့်နေသူကတော့ ဘယ်လိုအင်အားမျိုးနဲ့ ဆောင့်နိုင်သည်မသိ။ နာရီဝက်လည်း ကျော်ပြီ။ ချိုလွင်ပြီးတာလဲ သုံးခါရှိပြီ။ တော်ပါတော့ ကိုရယ်။ ပြီးလိုက်ပါတော့။ မပြီးသေးဘူးလား ကိုရယ်။ ချိုလွင် မောလှပြီ။ အောင့်လဲ အောင့်နေပြီ။ မောဟိုက်စွာ ပြောလာသော ချစ်သူကလေးကိုကြည့်ရင်း ဒွန်းရင်ထဲမှာ ချစ်ခြင်းတွေ ယိုဖိတ်လို့လာသည်။ တကယ်တော့ သူလည်း အရမ်းမောနေပါပြီ။ နာရီဝက်ကျော်အောင် မရပ်မနား အပေါ်မှ ဆောင့်နေရတာ မမောပဲ ဘယ်ခံနိုင်ပါမည်တုန်း။ မိန်းကလေးတွေက ယောက်ျားတွေနဲ့ မတူပဲ ထပ်ခါထပ်ခါ ပြီးနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်မို့ ကြာကြာခံချင်ကြသည်ဟု ကြားဖူးသဖြင့် တတ်သမျှ မှတ်သမျှ နည်းတွေဖြင့် သုက်ကို အတင်းအောင့်ထားရခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခုတော့ အချစ်ကလေးက တောင်းဆိုလာသည်မို့ ပြီးလိုက်တော့မည် ဟု တွေးရင်း စိတ်ကို လျှော့လိုက်သည်။ စိတ်လျှော့လိုက်သည် ဆိုတော့မှ ဆောင့်ချက်တွေက ပိုပြင်းလာသည်။ ဒွန်း၏ကြီးမားရှည်လျားသော လီးကြီးသည် ချိုလွင့်စောက်ပတ်ကလေး၏ အဆုံးထိ ၀င်လာပြီး သားအိမ်ခေါင်းကလေးကို ထိုးမိလို့နေသည်။
ပထမတော့ ချိုလွင် မျက်ဖြူလန် သွားအောင်ကို ကောင်းသည်။ သို့သော် တဖြည်းဖြည်းနှင့် အရှိန်က ပိုပိုပြင်းလာတော့ နာလာသည်။ သည်အချိန်မှာ ရပ်ခိုင်းလိုက်လျှင် ဒွန်းတစ်ယောက် တိုးလိုးတန်းလန်းကြီး ဖြစ်သွားမည်ကို သိသဖြင့် လုံးဝမအော်ဟု ဆုံးဖြတ်ကာ နှုတ်ခမ်းလေးကို ကိုက်ကာ အောင့်ခံသည်။ ပထမတစ်ချက်၊ နှစ်ချက်၊ နောက်တော့ ငါးချက်၊ ဆယ်ချက်။ မပြီးနိုင်သေး။ ခါးကလေးကို လိမ်တွန့်ကာ နောက်ဆုတ်ရန် ဟန်ပြင်ခိုက်မှာပင် ဒွန်းကလည်း ဖိသိပ်ပြီး သုက်တွေကို ပန်းထုတ်လိုက်သောအခါ ချိုလွင့်အသည်းနှလုံးတွေ ကပြောင်းကပြန် ဖြစ်ကုန်သည်။ သာမန်အားဖြင့်ဆိုလျှင် သားအိမ်ခေါင်းကလေးက ဆံချည်မျှင်ငါးမျှင်စာသာ ပွင့်သည်။ ယခုတော့ ဒွန်း၏ ဒုတ်ရှည်ကြီးက တဒုတ်ဒုတ်ဖြင့် တံခါးလာခေါက် နေသဖြင့် မပွင့်ချင်ပွင့်ချင်ဖြင့် ဟတတကလေး ဖြစ်လာရသည်။ ထိုအချိန်တွင် လီးကြီးက အတင်းဖိသိပ်လာတော့ အပေါက်ကလေး ပိုပွင့်သွားကာ လီးထိပ်မှ ဆီးထွက်ပေါက်နှင့် သားအိမ်ခေါင်းဝလေး တည့်တည့်ဖြစ်သွားရ၏။ သုက်ရည်တွေကို သားအိမ်ထဲ တည့်တည့်ရောက်အောင် သဘာဝက ဖန်တီးပေးထားခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ မိနစ်သုံးဆယ်ကျော် လေးဆယ်နီးပါး ဆောင့်လိုးနေချိန် အတွင်းဝယ် ဒွန်း၏သုက်ကောင်များသည် စတိုခန်းဖြစ်သော ဥနှစ်လုံးထဲမှ ထွက်လာပြီးနောက် ပန်းထွက်ရန် တာစူထားရာ အခုလို တာလွှတ်လိုက်သောအခါ ဝေါကနဲ ထွက်သွား။ ရမက်မီးကြောင့် ပူလောင်နေပြီး အရှိန်ကတော့ မီးသတ်ပိုက်ဖြင့် ပက်လိုက်သည့်အလား အားပြင်းလှ၏။ချိုလွင်ကတော့ ယခင့်ယခင် အခါများကထက် ပိုပြီး ခံစားလိုက်ရသည်။ ယခင်တုန်းက ပြီးတာတွေက တာကျိုးသလို၊ ဆည်ပေါက်သလို၊ ပြီးသည်ဆိုပါလျှင် သည်တစ်ခါကတော့ မီးတောင်ပေါက်တာမျိုးဖြစ်သည်။ ပွက်ပွက်ဆူနေသယောင် ထင်ရသော သုက်ရည်များ သားအိမ်ထဲ အပြေးဝင်လာသော ခံစားမှုက အင်ဒိုနီးရှား ဆူနာမီဖြစ်စေသော မီးတောင်ကြီး ပေါက်သလိုပင်။ ယခင့်ယခင်အခါများကထက် အဆပေါင်းများစွာ သာလွန်သော ပြီး}ခြင်းဖြင့် ပြီးသွားပြီးနောက် ချိုလွင့်စိတ်တွေ ခန္ဓာကိုယ်မှ ခဏခွဲခွာသွားသည်။
သည်လိုအရသာမျိုးကို တော်တော်တန်တန် မိန်းမတွေ ခံစားဖူးမှာ မဟုတ်ဘူးဟု တွေးမိရင်းက ချိုလွင်သည် ဒွန်းကို အရမ်းစွဲမက်သွားတော့၏။ ခံစားရတာတွေ များလွန်းသဖြင့် ချိုလွင့်ခန္ဓာကိုယ်ကား ခြေကုန်လက်ပန်း ကျသွားလေပြီ။ ဖားပေါင်စင်းကလေး တစ်ကောင်လို ခြေကားယား လက်ကားယားဖြင့် ကုတင်ပေါ်တွင် အရုပ်ကြိုးပြတ် မလှုပ်မယှက် ဖြစ်နေတော့၏။ ဒွန်းသည်လည်း ဟောဟဲဆိုက်အောင် မောသွားသဖြင့် သုက်ရည်တွေကို ပန်းထုတ်ပြီးနောက် ချိုလွင့် ကိုယ်ပေါ် မှောက်ကျသွား၏။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ရင်ခုံသံနှစ်ခုက ထပ်တူထပ်မျှပင်။ မြင်းခွာသံတွေလို ဒုတ်ဒုတ် ဒုတ်ဒုတ်နှင့် ပြိုင်တူခုန်နေကြ၏။ နောက်ထပ် ခုန်နေသော နေရာတစ်ခု ရှိပါသေးသည်။ ယင်းကား ချိုလွင့်စောက်ပတ်ထဲတွင် မြုပ်နေဆဲဖြစ်သော ဒွန်း၏ညီတော်မောင်ပင် ဖြစ်သည်။ မိနစ်လေးဆယ် လိုးပြီးတာတောင် ဒွန်းက မကျေနပ်သေးပါ။ ခဏနားပြီး ထပ်ဆော်ရန် ကြံနေပါ၏။ အမောနည်းနည်းပြေတော့ ဒွန်း၏လက်များက ချိုလွင့် နို့တွေကို ဆုပ်ညှစ်ပေးလိုက်သည်။ မည်သည့်တုံ့ပြန်မှုမှ မရ။ ချိုလွင့်နဖူးကို နမ်းလိုက်သည်။ အရင်က အတိုင်းပဲ။ ရင်သားနုနုကလေးများနှင့် ပုခုံးသားလုံးလုံးကလေးတွေကို ပွတ်သပ်ပေးရင်း နှုတ်ခမ်းလေးကို အားဖြင့် စုပ်ယူလိုက်သည်။ တုတ်တုတ်မျှ မလှုပ်။ စောက်ပတ်ထဲမှ ညီလေးကို နည်းနည်းဆွဲထုတ်ကာ ပြန်ဆောင့်လိုက်သည်။ ဘာမှမထူးချေ။ ချိုလွင်တစ်ယောက် သတိလစ်ကာ လောကကြီးနှင့် အဆက်ပြတ်သွားပြီ ဖြစ်လေသည်။ ဒွန်းက ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ သွေးစများ တွေ့လိုက်ရ၏။ သေချာဖြဲကြည့်တော့ ချိုလွင့်စောက်ပတ် အနားသားတွင် ပွန်းနေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ နည်းနည်းကလေး ကွဲနေခြင်း ဖြစ်သည်။ တစ်ရှူးတစ်စယူကာ ဖိထားလိုက်တော့ ခဏအကြာတွင် တိတ်သွားသည်။ ချိုလွင်ကတော့ တစ်ချိန်လုံးပင် အိပ်ရာမှ မနိုးပါ။ ခြေကုန်လက်ပန်း ကျနေသော ချစ်သူလေးကို ဒွန်းကမနှိုးချင်တော့။ ချိုလွင့်ကို စောင်ချုံပေးခဲ့ပြီးနောက် ရေချိုးခန်းထဲ ခြေဖျားထောက်ဝင်ကာ ရေချိုးပြီး အသာကလေး ပြန်ထွက်လာခဲ့သည်။ သူ့ဖုန်းနံပါတ်ကို ချိုလွင့်စားပွဲပေါ်မှ စာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်တွင် ရေးထားခဲ့ပြီးနောက် အသာကလေး ထွက်သွားလေ၏။ ချိုလွင်တစ်ယောက် အိပ်မက်ကမ္ဘာတွင် ဒွန်းနှင့် အချီပေါင်း မရေမတွက်နိုင်အောင်ဆွဲပြီး နောက်ဆုံးတွင် ဒွန်းက ချိုလွင့်ပုခုံးကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း လှုပ်ခါပြီး ကိုယ့်ကိုချစ်ရဲ့လား။ ဖြေပါဦး ဟု မေးလေ၏။ ချိုလွင်ကလည်း လေသံပျော့ပျော့လေးဖြင့် ချစ်တာပေါ့ကိုရယ် . . . ကိုရော ချိုလွင့်ကို ချစ်ရဲ့လား။ ချစ်ရင် ထပ်လုပ်ပေးနော် ဟု ညုလိုက်လေသည်။
ပြောနေရင်းတန်းလန်းမှ ချိုလွင် လန့်နိုးလာပြီး မျက်လုံးကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရာတွင် သူ့အား ခပ်စူးစူး စိုက်ကြည့်နေသော ရွှေစင်ကို မြင်လိုက်ရ၏။ အခုနက ချိုလွင့်ပုခုံးကို လှုပ်သူမှာလည်း ရွှေစင်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ကောင်မ . . . ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲ။ နင့်ပေါင်ကြားထဲမှာလဲ မြင်လို့တောင် မကောင်းဘူး။ သွေးတွေရော၊ ဟိုအရည်တွေရော။ မွေ့ရာလဲ ပစ်ရပါပြီ ရွှေစင့်စကားကြောင့် ချိုလွင့်ပါးကလေးများ နီရဲတွတ်သွားသည်။ အောက်ကို ငုံ့ကြည့်တော့လဲ မွေ့ရာပေါ်မှ အကွက်ကြီးက နည်းတာကြီးမဟုတ်။ မွေ့ရာအောက်ပိုင်း တစ်ခုလုံး စိုရွှဲနေကာ လရည်နံ့တွေက မွှန်ထူလို့နေသည်။ ရွှေစင်က ထပ်မေးလိုက်သည်။ နင့်ကို ဘယ်နှချီလောက် လိုးသွားသလဲငါ ပြီးသွားတာ လေးချီထက်တော့ မနည်းနိုင်ဘူး။ သူကတော့ နှစ်ချီပြီးတယ်ဘယ်လိုမျိုး လိုးသွားတာလဲ။ ခွေးလိုးလား၊ မြင်းစီးသေးလားဟင့်အင်း . . . ငါ ပက်လက်လှန်ပေးထားတာကို အပေါ်ကနေ သူဆောင့်သွားတာ။ သူ့ဟာကြီးက အရမ်းကြီးတာပဲ။ ငါဘယ်လိုမှ မတောင့်ထားနိုင်ဘူးဘယ်လောက်ကြာသွားသလဲ ချိုလွင်က နာရီကို လှမ်းကြည့်လိုက်သည်။ ဒွန်းထွက်သွားတာ ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်ပဲ ရှိဦးမည်။ တော်ပါသေးရဲ့။ မဟုတ်ရင် သည်ရွှေစင်ဆိုတဲ့ ဖာသည်မနဲ့ တွေ့နေဦးမယ်။ ဟု စိတ်ထဲမှ တွေးလိုက်ရင်း တစ်နာရီနီးပါးကြာမယ်ထင်တယ်။ မိနစ်လေးဆယ်လောက်မှာ ငါသုံးခါပြီးတာ မှတ်မိတယ်။ အဲသည်နောက်မှာ တစ်ခါ ထပ်ပြီးသေးတယ်။ . . . ငါရေသွားချိုးလိုက်ဦးမယ်ဟာ ပြောရင်းမှ ချိုလွင်က မတ်တတ်ထရပ်လိုက်သောအခါ ဒူးတွေချောင်နေသဖြင့် တစ်ချက်ယိုင်သွား၏။ ကုတင်အောက်က ဖိနပ်ကို ရှာနေရင်းမှ ပေါင်ကြားထဲမှ ပူနွေးသော ခံစားမှုက ပေါင်ရင်းနှင့် ခြေထောက်များဆီ ပြန့်လာသဖြင့် ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ အဖြူရောင်ပျစ်ပျစ် အရည်များ စောက်ပတ်ထဲမှ စီးထွက်လာသည်ကို တွေ့လိုက်ရလေသည်။ သည်မြင်ကွင်းကို ရွှေစင်က မျက်စေ့ဒေါက်ထောက် ကြည့်နေသဖြင့် ချိုလွင်တစ်ယောက် အနေခက်သွားကာ ရေချိုးခန်းထဲ ခပ်သုတ်သုတ် ၀င်လိုက်ရ၏။
သည်ကြားထဲ ပေါင်ကြောတွေ တင်းနေသဖြင့် ကွတကွတ ဖြစ်နေသေးသည်။ ရေချိုးနေရင်း ချိုလွင်သည် ဒွန်းကို သတိရနေလေ၏။ စောက်ပတ်ကလေးကို ပွတ်ရင်း လိုးခဲ့သည်များကို ပြန်လည်သတိရနေချိန်၌ ဒွန်းသည်လည်း သူ့အခန်းထဲတွင် ဂွင်းထုရင်း ဖီလင်တက်နေလေသည်။ ချစ်သူနှစ်ယောက် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် သတိရနေချိန်တွင် ရွှေစင်က ကြားဝင်လာတော့သည်။ အခုနက ကုတင်ပေါ်တွင် ပေပွနေပြီး အိပ်မောကျနေသော ချိုလွင့်ပုံစံကို မြင်လိုက်ရသည်တွင် ရွှေစင်တစ်ယောက် အံ့အားသင့်သွားသည်။ တစ်ဆက်တည်းပင် မိန်းမတစ်ယောက်ကို သည်လောက်အထိ စွဲမက်ဖွယ် လိုးပေးနိုင်သော ဒွန်း၏လီးကိုလည်း စမ်းသပ်ချင်လာသည်။ ယခင်ကတည်းက စမ်းသပ်ချင်ပါသော်လည်း ယခုမူကား အရမ်းကို စမ်းသပ်ချင်လာပြီ ဖြစ်လေသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဒွန်း၏ ဖုံးနံပါတ်ကို ချိုလွင့်စားပွဲပေါ်တွင် တွေ့လိုက်ရသောအခါ အချိုရှာ သကာတွေ့သကဲ့သို့ ရှိပေတော့သည်။ ချိုလွင် . . . သည်နေ့ တနင်္လာနေ့။ နင် ကွန်ပြူတာ သင်တန်းရှိတယ်မဟုတ်လား အေး . . . ဟုတ်သားပဲ။ မေ့နေလိုက်တာချိုလွင်သည် ကပျာကယာဖြင့် ရေချိုးခန်းထဲမှ ထွက်လာပြီး အ၀တ်အစားဝတ်ကာ ဘတ်စကားဂိတ်ဆီ ပြေးတော့၏။ ရွှေစင်တစ်ယောက် ကျေနပ်စွာ ပြုံးလိုက်ပြီး တယ်လီဖုန်းကို ကောက်ကိုင်လိုက်သည်။ ဒွန်း ဂွင်းထုလို့ ပြီးခါစတွင် ဖုန်းမြည်လာသဖြင့် ဒွန်း ကိုင်လိုက်သည်။ ဒွန်းလား . . . ချိုလွင်နိုးပြီ။ . . . အခုလာခဲ့နော်။ . . . စောင့်နေမယ် တစ်ဖက်မှ ဖုန်းချသွားသည်အထိ ဒွန်းစကားမပြောနိုင်ပါ။ အံ့အားသင့်လွန်းနေသဖြင့် ပါးစပ်အဟောင်းသား ဖြစ်နေမိသည်။ အတော်ကြာမှ ဘောင်းဘီကို ဆွဲတင်ကာ ကားသော့ကို လိုက်ရှာမိသည်။ ချိုလွင့်အခန်းသို့ ရောက်သောအခါ ခပ်ဟဟလေး ဖွင့်ထားသော အခန်းတံခါးကို တွေ့ရသည်နှင့် အသာကလေး လှမ်းဝင်လိုက်သည်။ အခန်းထဲသို့ ရောက်သည်နှင့် ရေမွှေးနံ့နှင့် လရည်နံ့တွေ မွှန်ထူနေအောင် ရလေ၏။ အခန်းထဲတွင် မည်သူ့ကိုမျှ မတွေ့ရချေ။ သို့သော် ရေချိုးခန်းထဲတွင် မိန်းကလေးတစ်ယောက် ရေချိုးနေသံ ကြားရသည်။ အခန်းတံခါးကို အထဲမှ သော့ခတ်ထားသဖြင့် ၀င်လို့တော့ မရချေ။ ဒွန်းသည် အိပ်ခန်းထဲ ပြန်ဝင်လာကာ အ၀တ်အစားများကို ချွတ်လိုက်၏။
ထို့နော် ချိုလွင့်ကိုယ်ငွေ့ဖြင့် ပူနွေးနေဆဲ အိပ်ရာပေါ် တက်လှဲနေလိုက်သည်။ နည်းနည်းချမ်းသလို ရှိလာသဖြင့် စောင်ခြုံထားလိုက်မိသည်။ သည့်နောက်တွင်တော့ မျက်လုံးများကို မှိတ်ကာ ခဏနားလိုက်ရင်း ဖျတ်ကနဲ အိပ်ပျော်သွားလေသည်။ မည်မျှကြာအောင် အိပ်ပျော်နေမိမှန်း မသိပါချေ။ နူးညံ့သော လက်နှစ်ဖက်က ဖွားဖက်တော်ကို (စောင်ပေါ်မှ) ပွတ်သပ်ဆုပ်နယ်နေသည်ကို ခံစားရတော့မှ ဒွန်းနိုးလာသည်။ ခေါင်းထောင်နေသော သူ့ညီတော်မောင်ကို ပြုစုနေသော လက်ကလေးများ ပိုင်ရှင်ကတော့ ပရိတ်သတ်ကြီး အကြိုက်ဖြစ်သော ရွှေစင်ပင် ဖြစ်တော့သည်။ “မီးက ရွှေစင်ပါ။ ချိုလွင့်သူငယ်ချင်းပေါ့။ ကိုဒွန်းကို အရင်ဆုံး ချစ်ခဲ့မိတာ မီးပါ။ ဟိုကောင်မ ချိုလွင်က အရင်ဦးသွားတယ်။ အခုတော့ သူဘာတတ်နိုင်သေးသလဲ။ ကိုဒွန်းက မီးဆီ ရောက်လာပြီပဲလေ။ ချိုလွင့်ထက် သာအောင် လုပ်ပေးမယ်” ရွှေစင်သည် တိုးညှင်းစွာ ပြောရင်းက သူ့ကိုယ်မှာ ပတ်ထားသော အဖြူရောင်တဘက်ကို ဆွဲချွတ်လိုက်၏။ မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်း ဖြစ်သွားသော သူမ၏ အလှသည် ဒွန်းကို ပါးစပ်အဟောင်းသား ဖြစ်သွားစေလေသည်။ ရွှေစင်၏ ဖင်များနှင့် နို့များက ချိုလွင့်ထက် ပိုသာသည်။ အသားအရောင်ကလည်း နည်းနည်းကလေး ပိုညိုပြီးေ-ာက်မွှေးများကို အသေအချာ ရိတ်ထားသဖြင့် အမေပေးသော လယ်ကွက်ကလေးက လှပသပ်ရပ်လို့နေသည်။ ဒွန်း၏ ညီတော်မောင်က လှံတံရှည်လို ထောင်တက်လာပြီး တိုက်ပွဲဝင်ရန် အသင့်ဖြစ်နေလေပြီ။ စောင်ကို လှန်လိုက်သော ရွှေစင့်လက်ကလေးများ တုန်ယင်လို့နေသည်။ “အိုး . . . အကြီးကြီးပါလား” ရွှေစင့်ပါးစပ်ကလေး ပွင့်ဟသွားပြီး အာမေဋိတ်သံကလေး ထွက်ကျလာသည်။ ဒွန်းက အချိန်မဆိုင်းပဲ ဟနေသော ပါးစပ်ကလေးထဲသို့ သူ့-ီးကြီးကို ထိုးသွင်းလိုက်၏။ ရွှေစင် ပါးစပ်ပြန်ပိတ်၍ မရတော့။ ဒွန်း၏-ီးကြီးကို မနိုင့်တနိုင် စုပ်နေရတော့သည်။ –ီးစုပ်ခြင်းသည် ရွှေစင်၏ အထူးပြုဘာသာရပ်တစ်ခု ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ချိုလွင့်ထက် သာအောင် စုပ်ပြနိုင်ပါသည်။ ခြောက်လက်မကျော်ကျော် –ီးကို ပါးစပ်ဖြင့် ခပ်ပြင်းပြင်းကလေး စုပ်ယူလိုက်၊ ပြန်ထုတ်လိုက်၊ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပြန်ဆောင့်ထည့်လိုက် လုပ်ရင်း ဒွန်းကို အကဲခတ်လိုက်သည်။ ဒွန်းကတော့ ဘာမှသိပ်ထူးခြားပုံမရချေ။
ရွှေစင်သည် အသက်ပြင်းပြင်း တစ်ချက်ရှိုက်ကာ ပါးစပ်ကို ထပ်ဖြဲရင်း ပိုလို့ စုပ်ယူလိုက်သည်။ တကယ်ကတော့ ဒွန်းဟန်ဆောင်နေခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ သူ့ရင်ထဲမှာ အရမ်းကို ထိလို့နေသည်။ သည်လို ဖာသည်စုပ်သည့်ဟန်ဖြင့် စုပ်ပေးတာကို ဒွန်းတစ်ခါမှ မခံဖူးပါ။ –ီးဒ-်ဖျားက ရွှေစင့်အာခေါင်ထဲအထိ ၀င်သွားသဖြင့် ခံစားမှုက အရမ်းကို ထိမိလို့နေသည်။ ရွှေစင်က မကြာခင်မှာ ဒွန်းပြီသွားလိမ့်မည် ဟု ထင်သဖြင့် ခပ်ကြမ်းကြမ်းကလေး စုပ်ပေးနေသော်လည်း ဒွန်းက တော်တော်နဲ့ မပြီးပါချေ။ နေ့လည်တုန်းက ချိုလွင်နဲ့ စခန်းသွားပြီး အိမ်ပြန်ရောက်တော့ တစ်ချီဆွဲထားသဖြင့် သည်တစ်ခါ တော်တော်နဲ့ မထွက်နိုင်။ ဆယ့်ငါးမိနစ်ခန့် စုပ်ပေး၍ လရည် မထွက်သော အခါတွင်ကား ရွှေစင် လက်မြှောက်လိုက်ရတော့၏။ သည်တစ်ချိန်သည် ရွှေစင့်ဘ၀တွင် ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ပထမဆုံး အံ့သြချီးကျူးမိခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ရွှေစင့်ေ-ာက်ပတ်ထဲတွင် မျှော့ပါသည်ဟု မကြာခဏ အပြောခံရသော်လည်း တကယ်ကတော့ ဘာဂျာစွမ်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ –ီးစုပ်ခြင်းကို ပါရမီပါသူ ရွှေစင့်အနေဖြင့် ဘယ်လို-ီးမျိုးမဆို ငါစုပ်လိုက်ရင် ပျော့သွားစေရမယ်ဟု ကြိမ်းဝါးလေ့ရှိသည်။ သည်တစ်ယောက်နှင့်မှ ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်ကြာသည်အထိ မထွက်နိုင်။ နောက်ဆုံးတွင် ရွှေစင့်အာခေါင်တွေ ကျိန်းစပ်လာသဖြင့် ပါးစပ်ထဲမှ ထုတ်ပေးလိုက်ရသည်။ သို့သော် စိတ်ကတော့ မလျှော့သေး။ –ီးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ကိုင်ကာ ပြောင်းတိုက်ပေးနေသေး၏။ ဒွန်းက ရယ်လိုက်ပြီးနောက် ခပ်ဖြည်းဖြည်း ပြောလိုက်သည်။ “ဖင်ကုန်းပေး” ရွှေစင်သည် ယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့် အိပ်ရာဝင်ရမည် ဆိုပါက ဘယ်တုန်းကမျှ နောက်မတွန့်ခဲ့။ သူမကိုယ်သူမ အပြည့်အ၀ ယုံကြည်မှုရှိသည်ချည်း။ ယခုတော့ ဒွန်း၏လှောင်ရယ်သံကို ကြားလိုက်ရသောအခါ ရွှေစင်နည်းနည်း တွန့်သွားသည်။ သည်လောက် ကြီးတဲ့-ီးနဲ့ အ –ိုးခံရမည်ဆိုတော့လဲ ရွှေစင်တွန့်လောက်ပါသည်။ အယောင်ယောင်အမှားမှားဖြင့် ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာပဲ ဖင်ကုန်း၊ လေးဖက်ထောက်ပေးလိုက်တော့ ဒွန်းကနည်းနည်း စိတ်ပျက်သွားသည်။ “ကုတင်ပေါ် တက်လေကွာ။ မဟုတ်ရင် ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ဒူးတွေပွန်းကုန်မယ်” ရွှေစင်က ကပျာကယာ ကုတင်ပေါ်တက်လိုက်သည်။ ခါးကိုခွက်ကာ ဖင်ကို ကော့ပေးလိုက်သောအခါ ရေဆေးထားသော ရွှေစင့်ေ-ာက်ပတ်ကလေးက ခရုသင်းလေးပမာ စေ့တေ့တေ့လေး ဖြစ်နေ၏။
အလိုးခံဖူးသော စအိုဝလေးကလည်း စူထွက်လို့နေသည်။ စိတ်လှုပ်ရှားနေသည့်အတွက် ရွှေစင့်ဖင်ကြီးတွေက ဘယ်ညာယမ်းလျက်ရှိ၏။ သူမကို အပြတ်ဖိုက်တော့မည်ဟု ဒွန်းက မောင်းတင်ကာ သူ့ညီကို အရင်းမှကိုင်ပြီး ဒ-်မြုပ်ရုံသွင်းကာ မွှေနှောက်ပေးလိုက်သည်။ လက်ကလည်း စအိုဝလေးကို ဖိပေးလိုက်တော့ ရွှေစင့်နှုတ်မှ အားကနဲ၊ အိုကနဲ အော်ကာ ဖင်ကို ယမ်းပေးသည်။ ဒွန်းက သူမခါးကိုကိုင်ကာ ခပ်မြန်မြန်လေး ထိုးသွင်းလိုက်တော့ –ီးတစ်ဝက်လောက် ၀င်သွား၏။ “အား . . . နာတယ်” ရွှေစင်က အော်ကာ ဒွန်းကို ခါထုတ်သည်။ သို့သော် ဘာမှလုပ်၍မရ။ ဖင်ကုန်းပေးထားတာမို့ ပေါင်စေ့လို့လည်းမရ။ ဒွန်းကိုလည်း တွန်းထုတ်လို့မရ။ နာတာကို အော်ဟစ်ရင်း –ီးကိုေ-ာက်ပတ်နဲ့ ညှပ်တာလောက်ပဲ တတ်နိုင်သည်။ အရသာတွေ့သွားသော ‘ဒွန်းက ဆက်မသွင်းတော့ပဲ ခပ်မြန်မြန် ပြန်ညှောင့်ပေးလိုက်တော့ ရွှေစင့်ခါးကလေး ပိုခွက်လို့သွားသည်။ ပြီးချင်လာတာမို့ ခါးကို မွှေ့ယမ်းပေးရင်း –ီးကို ညှပ်ညှပ်ဆွဲလိုက်သည်။ ဒွန်းကလဲ ရွှေစင်ခံနိုင်သလောက်သာ ခပ်သွက်သွက် ဆွဲလိုက်ရာ ဆယ်ချက်၊ ဆယ့်ငါးချက်လောက်အတွင်း ရွှေစင်တစ်ယောက် ကိစ္စပြီးမြောက်လို့သွားသည်။ “အား . . . ပြီးပြီ . . . အု အု” ရွှေစင်က ခေါင်းအုံးကြားထဲ မျက်နှာအပ်ကာ အော်လိုက်၏။ ပြီးသွားတာ မြန်လွန်းသဖြင့် သူမကိုယ်သူမ အားမရပါ။ အရင်ကဆိုလျှင် ယောက်ျားတွေက အခုပဲ –ိုး၊ အခုပဲ ထွက်တယ်ဟု လှောင်ရယ်ခဲ့ဖူးသည်။ သည်နေ့တော့ ရွှေစင်ဝဋ်လည်လေပြီ။ သူမကိုလိုးနေသော –ီးကြီးကေ-ာက်ပတ်ထဲမှာ မာတောင်နေဆဲ။ အဆုံးထိပင် မ၀င်ရသေး။ ရွှေစင်တစ်ယောက် အရည်တွေ ပန်းထွက်ကာ ပြီးသွားလေပြီ။ မနေ့ကမှ မိန်းမစချဖူးသော်လည်း အတွေ့အကြုံမနည်းသော ဒွန်းက ရွှေစင်ပြီးသွားတာကို သိလိုက်သည့်အတွက် အသာကလေး အရှိန်လျှော့ကာ ရပ်လိုက်လေသည်။ သူမပြီးသွားတာကို ဒွန်းသိကြောင်း ရွှေစင်က ပြန်သိလိုက်သည့်အတွက် မျက်နှာကလေး ရဲတွတ်ကာသွားလေတော့၏……ပြီး။
သ မီး ကို ပြစ် မ သွား နဲ့ နော် ဦး